Karlo Letica: “Markaan Arkay Wararka Ila Xiriirinaya Real Madrid – Taleefoonka Ayaan Iska Damiyay” | Raadgoob
Karlo Letica: “Markaan Arkay Wararka Ila Xiriirinaya Real Madrid – Taleefoonka Ayaan Iska Damiyay”
March 13, 2018 - Written by admin
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa iney xiiso u qabto goolhayaha da’da yar ee xulka Croatia Karlo Letica, balse xidiga qudhiisa ayey layaab ku noqotay markii uu wargeyska ku arkay sheekada ku saabsan iney xiiso u qabto mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dunida.
21-jirkaan heerka caalami wuxuu bandhig aan caadi aheyn kusoo bandhigay kooxdiisa Hajduk Split, sidoo kalana taas kama saacidin wali inuu aamino in koobka Aduunka ee Russia looga yeeri doono.
Los Blancos waxey aad u baadi goobeysaa goolhaye badal buuxa u noqda Keylor Navas, waxaana si weyn loola xiriirinayaa David de Gea & Thibaut Courtois, sidoo kalana waxaa jiray warar horay ula xiriirinayay Kepa Arrizabalaga.
“Waxana ku arkay bogga hore ee Marca iyo waxa ay iga yiraahdeen aniga, sidaas darteed waxaan damiyay taleefoonkeyga” ayuu yiri Karlo.
“Run ahaantii, warka waa iga yaabiyay”
“Waqtiga ugu badan ee arintaan laga hadli karo maahan hadda”
Dhanka kale wakiilka xidigaan Sinisa Soso ayaa shaaca ka qaaday in goolhayaha da’da yar uusan ku jirin waqti deg-deg ah isla markaana uu ku faraxsan yahay kooxdiisa siina wadan doono hormarkiisa kooxda Hajduk Split.